1600W ike ọkọnọ maka gpu miners
Okwu Mmalite ngwaahịa
1. Low mkpọtụ, obere ripple na elu arụmọrụ, na-enye ike kwụsie ike maka igwe Ngwuputa gị.
2. Ịnabata ụdị convection abụọ-roller fan convection, obere mkpọtụ, mmetụta dị mma na-ekpo ọkụ ọkụ, na-agbalịsi ike ịkwalite mgbasa ọkụ na arụmọrụ.
4. Otutu ihe nchebe, dị ka oke ọkụ, oke ibu, oke ibu, wdg.
5. N'iji ihe ọhụrụ eme ihe, arụ ọrụ ahụ na-akwụsi ike na ntụgharị ntụgharị dị elu.
N'ịdị mma dị mma, a na-eji ọkụ eletrik anyị eme ihe n'ọtụtụ igwe na-egwuputa ihe dị iche iche, ọ dịkwa mma maka ngwá ọrụ mmepụta ihe dị elu nke otu 12V.
1. Kedu maka njikwa njikwa nke ụlọ ọrụ gị?
Anyị nwere ọkachamara QA & QC pesonel ndị ga-n'ụzọ zuru ezu soro iwu, dị ka inspecting ihe, na-ahụ maka mmepụta, random nnyocha nke okokụre ngwaahịa, nkwakọ nnyocha, wdg. Anyị na-anabata a ọzọ ụlọ ọrụ ndị ị họpụtara na-eduzi a keukwu nnyocha. ịtụ gị.
2. Ego ole bụ ibu ibu?
Ọnụ ego mbupu na-adabere n'ihe ndị dị ka ngwungwu nha, ịdị arọ na ebe ị ga-aga.Ọnụ ego mbupu ga-egosipụta na nkwupụta anyị na-ezigara gị.
3. Gịnị kpatara ịzụrụ n'aka gị kama ndị na-ebubata ndị ọzọ?
Anyị na-etinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ire ngwaahịa ndị metụtara blockchain Mining Machine kemgbe 2015, ma nwee ahụmịhe mmepụta na ahụmịhe ahịa.Ma ọ bụ igwe na-egwuputa ihe nke GPU ma ọ bụ ngwa igwe na-egwuputa ihe, anyị bụ ndị ọkachamara nke ukwuu.Tụkwasị na nke ahụ, anyị eguzobewokwa otu ọkachamara mgbe-ahịa ahịa na otu ndị ahịa mba ọzọ na-eje ozi nke ọma maka ndị ahịa ọ bụla, nke bụ ụkpụrụ ọrụ anyị kacha mkpa.
Nke gara aga: Igwe ngwuputa chassis nwere oghere 55mm na interface ihu
Osote: RX588 gpu miner nwere ike mgbako nke 240MHs
Ogo ọkọnọ ike
12V (6 pin otu isi) * 8/12V (6Pin isi okpukpu abụọ)*2
Ethereum Ngwuputa 6 kaadị 800W obere mkpọtụ Ngwuputa m ...
Ndị na-egwupụta ụlọ igwe IDC dị elu nwere olulu ...